Ny famerenana fanisàna vato no hilaza ny vokatry ny fifidianana tao Goiàna hoy ny Fitsarana Antampony · Global Voices teny Malagasy
Nilaza hanaiky izay ambaran'ny GECOM ny filoha Granger
Voadika ny 31 Jolay 2020 15:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Español, Ελληνικά, English
Ny 30 Jolay 2020, namoaka didy momba ilay raharaham-pifidianana Misanga Jones ireo mpitsara telo avy amin'ny fitsaràna antampony ao Goiàna. Pikantsary nalaina tao amin'ny fampitàna mivantana nataon'ny Stabroek News tamin'ny namoahana ilay didy.
Ny 30 Jolay, navoakan'ny Fitsarana Antampony ao Goiàna ny fanapahany momba ny raharaham-pitsarana nampidirin‘i Misenga Jones, iray amin'ireo mpanohana ny governemanta iaraha-mitantana A Partnership for National Unity/Alliance for Change (APNU+AFC), izay nangataka tamin'ny fitsaràna mba hahafahana mamerina manisa ny vatom-pifidianana.
Fanapahankevitra niraisan'ny rehetra ary nalefa nivantana, namoaka didy ny fitsarana antampony ao amin'ny firenena fa tokony hirosoana ny famerenana manisa ireo vatom-pifidianana mba hamaritana sy hanambaràna ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka, izay natao tamin'ny 2 Martsa, efa ho dimy volana lasa izao.
Nolazain'i Jones fa ireo tarehimarika naroson'i Clairmont Mingo, tomponandraikitra ara-pifidianana nisahana ny Faritra faha-4, ilay distrika isian'ny disadisa sy resabe momba ny voka-pifidianana, dia tokony ho nampiasaina hanomanana ny tatitry ny Tale Jeneraly misahana ny fifidianana.
Ao Goiàna, ny vokatra rehetra tamin'ny fifidianana dia tsy maintsy voamarina amin'ny alàlan'ny Fanambaràna momba ny fifidianana avokoa; ireo vokatra voalohany navoakan'i Mingo dia novakiana avy any anaty sombin-taratasy fanaovana kajikajy.
Ireo mpitsara telo niaraka nitantana ihany koa dia namoka didy hoe tsy maintsy mametraka ny tatitra ofisialy avy aminy ary mifanaraka amin'ny vokatry ny famerenana manisa vato ny Tale jeneraly misahana ny fifidianana.
Tany am-boalohany i Lowenfield dia niteny fa vatam-pifidianana maromaro no “tratry ny aretina” [vatom-pifidianana tsy azo hamarinina ho ara-drariny]; na eo aza ny fepetra mazava napetraky ny lalàna ary mifanohitra amin'izany, nihizingizina izy ny tsy hampiditra azy ireny ho ao anatin'ny tarehimarika. Ankehitriny, toa tsy hanana safidy intsony no fahitàna azy.
Ilay fanapahana dia mifanaraka tsara amin'ny didy navoakan‘ny Caribbean Court of Justice's (CCJ) izay milaza fa:
Mandra-pisian'ny didy hafa avoakan'ny tribonalim-pifidianana, raha misy izany, tsy misy na olona iza, na manampahefana iza afaka hilaza hisy lasa ho vato maty izay vatompifidianana rehetra nisaina ho toy ny manankery nandritra ny famerenana nanisa .
Samy manohitra ny fanapahankevitra noraisin'ny governemanta daholo ireo didy roa nivoaka ireo, ny governemanta izay nilaza tamin'ny 26 Jolay fa “tsy maintsy esorina ” amin'ireo fanisana vatompifidianana ireo vato hosoka. Aorian‘ny famoahana ny vokatra faobe ihany ny lalàna ao Goiàna vao mamela ny fanaovana fanoherana voka-pifidianana amin'ny alàlan'ny fanangonantsonia momba ny fifidianana sy fametrahana amin'ny toerany ny governemanta. Ny fanoherana ny maha-aradrariny ny vatompifidianana dia tsy afaka atao raha mbola amperiny ny dingam-pifidianana.
Voalazan'ny fampitambaovaon'ny APNU+AFC ihany koa fa:
Natomboky ny APNU+AFC ny famerenana nanisa ny vatompifidianana, miaraka amin'ny fanantenana fa hanaovana fanadihadiana ireo zava-mampisalasala tamin'ny fanambaràna Mingo. Tsy toy ny tamin'ny 1997 [fony Janet Jagan nanao ny fianianany ho filohampirenena rehefa lany tamin'ny alàlan'ny People's Progressive Party (PPP)], tsy tany an-katakonana ny filoha Granger no nanao fianianana, fa nanosoka hevitra ny hamerenana manisa ny vatompifidianana satria isika tsy manana zavatra ho afenina. Ny nivoaka nandritra ilay dingana dia ny fisiana taratra hosoka faobe tamin'ny fifidianana sy ‘familiviliana’ natao ho an'ny tombontsoan'ny PPP.
Ny mpisolovava avy amin'ny PPP mpanohitra dia tsy nitsahatra nanohana ny hoe amin'ny alàlan'ny fanangonana sonia momba ny fifidianana irery ihany vao afaka atao ny fanoherana rehetra an'ilay famerenana manisa ny vatompifidianana, ary nangataka tamin'ny fitsarana antampony mba hamela ny Guyana Elections Commission (GECOM) hamarana sy hanambara ny vokatry ny fididianana.
Koa satria ankehitriny efa nosokafan'ilay didy fanapahana ny làlana mankany amin'ny fanatanterahana izany, ho hita eo raha toa hisintaka amim-boninahitra na tsia ny APNU+AFC.
Vantany vao navoaka ilay didy, nilaza ny filoha David Granger fa hanaiky tsy misy fepetra izay ambaran'ny GECOM, na dia hisy amin'izany aza ny fanambaràna fa tsy manankery ny vato azon'ny antokony.
Kanefa, tao anaty lahatsary iray tao amin'ny Facebook nalefa fotoana fohy taorian'ny namoahana ilay didy, no noraketin'ilay mpandrindra ny fampielezankevitry ny APNU+AFC, Joseph Harmon, ny tsy hafaliany tamin'ny “fomba nananganana ny fitsarana [antampony]”, ary nihevitra izy hoe “tsy mifanaraka amin'ny lalàna” ilay didy. Nohamafisiny ihany koa ny fijoroan'ny antokony amin'ny hoe “tsy azo atao fototra ho an'ny fanambaràna farany ny vokatry ny fifidianana ireo vatompifidianana hosoka”.
Nanamafy ny sahoan-dresaky ny olona ireo fomba fijery roa mifanohitra ireo, izay milaza fa misy hantsana goavana tsy mitsaha-mitombo ao anatin'ilay fiarahamitantana, izay toa tsy nivononan'ilay antoko akory ny hisedra sy ho tafavoaka velona aminy.
Ho setrin'ireo fanambaràn'ny APNU + AFC momba ireo vatompifidianana hosoka, ny tatitr'ireo mpanaramaso avy amin'ny Caribbean Community (CARICOM) dia namintina fa “tsy ampy ho atao antony tsy hampanankery ny vatompifidianana voakajy nandritra ilay famerenana nanisa raha ireo tsy fahatomombanana tsikaritra, ka noho izany […] TSY mahafeno ny fepetra ho entina manohitra ny maha-mety ilay dingana fanisana fanindroany natao.